DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP LASERJET P1102 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet P1102
Kọmpụta HP LaserJet P1102 kọmpụta nwere ezigbo ndị ahịa na-achọ ma na-ejikarị ya ma n'ụlọ na ọrụ. O di nwute, ihe ngwaike nke onye nbipute enweghi ike ichota otu asusu ya na Windows 7 na nsosiputa ndi ozo. N'ihi ya, ọ gaghị ahụ kọmputa gị dị ka ngwaọrụ zuru ezu.
Ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet P1102 nbipute
Ndị ọkachamara ahụmahụ mara na maka mkpụrụedemede ọ bụla, gụnyere ndị na-ebi akwụkwọ, a chọrọ ọkwọ ụgbọala - usoro ihe omume dị mkpa maka njikọ nke sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ njedebe. Ugbu a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ụzọ iji chọọ ma jikọọ software.
Usoro 1: HP Official Website
Ebe onye na-emepụta ọrụ bụ ebe kacha mkpa ịchọta onye ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ma budata nsụgharị kachasị ọhụrụ ya, jikọtara ya na sistemụ arụmọrụ ahọrọ, na-enweghị nchegbu banyere nchekwa nke ebudatara faịlụ. Ka anyị were usoro a.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ HP ọrụ
Mepee portal HP site na ịpị njikọ n'elu. Na mpaghara elu nke saịtị ahụ, họrọ taabụ "Nkwado"mgbe ahụ "Software na ndị ọkwọ ụgbọala".
Ngwaọrụ anyị bụ onye nbipute, ya mere họrọ ụdị a.
Tinye aha nke nlereanya nke mmasị n'ọhịa wee pịa nhọrọ a chọtara site na menu ndọpụta.
A ga-akpọrọ gị gaa na peeji nke usoro nchịkọta chọrọ. Na saịtị ahụ ga-achọpụta na-akpaghị aka na mbipute nke sistemụ na bit omimi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike pịa "Gbanwee" ma họrọ Os ọzọ.
Ụdị mbipụta nke ugbu a dị ka "Dị mkpa". E nwere bọtịnụ na-abụghị ọkwa Download - pịa ya iji chekwaa faịlụ nwụnye na PC.
Ozugbo emelitere faịlụ faịlụ ahụ, pịa ya ugboro abụọ iji malite.
Enwere nhọrọ abụọ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala - site na eriri USB na ọwa ikuku. N'ọnọdụ anyị, ejiri njikọ USB. Anyị na-ahọrọ nhọrọ a na ngalaba maka P1100 usoro ihe odide (P1102 dị na usoro nke ngwa a).
Anyị pịa "Malite nrụnye".
Usoro ihe omume ahụ ga-egosiputa ndụmọdụ ndị na-enye obi ụtọ na ọrụ nbipute na ntọala mbụ. Jiri ngwa iji wepu ozi a.
Ị nwere ike ịga ozugbo na nwụnye site na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị na n'elu panel.
N'ikpeazụ, windo ahụ ga-apụta, gosipụta isi ihe ahụ "Ntinye ngwa ngwa (akwadoro)" wee gaa nzọụkwụ ọzọ.
Họrọ ụdị ngwaọrụ - na nke anyị, nke a bụ akara nke abụọ HP LaserJet Ọkachamara P1100. Push "Na-esote".
Tinye ntụpọ n'ihu usoro njikọ dịnụ, jikọọ eriri USB na kọmputa, wee pịa ọzọ "Na-esote".
Mgbe ịchichi ahụ gasịchara, windo ozi ga-eziga gị.
A pụghị ịkpọ usoro ahụ dị mgbagwoju anya, dịka ngwa ngwa. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ụzọ ndị ọzọ nwere ike ịba uru karịa gị.
Usoro 2: Akaụntụ Nkwado HP
Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọrụ nke ya na-arụ ọrụ na laptọọpụ na ngwá ọrụ ụlọ ọrụ. Iji ya dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu ngwaọrụ HP chọrọ nkwụnye na mmelite ọkwọ ụgbọala. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ibudata usoro ihe omume ahụ ga-abụ nke na-ezighị ezi.
Download Nkwado HP Nkwado site na saịtị ahụ.
Ibudata ma wụnye Enyemaka aka na Caliper. Na ọkachamara nwụnye enwere 2 windo ebe ịchọrọ ịpị "Na-esote". Ụzọ dị mkpirikpi ka onye nnyemaaka awụnyere na-egosi na desktọọpụ. Gbaa ya.
Ihuenyo na-anabata ga-apụta. N'ebe a, ị nwere ike ịtọ ntọala gị na uche gị ma gaa n'ihu nzọụkwụ ọzọ.
Atụmatụ na-akọwa otu esi arụ ọrụ na onye inyeaka nwere ike ịpụta. N'ịbụ ndị furu efu ha, pịa bọtịnụ ederede. "Lelee maka mmelite na posts".
Nyocha na nchịkọta nke ozi dị mkpa ga-amalite, chere. Nke a nwere ike iwe nkeji ole na ole.
Mepee ngalaba "Mmelite".
A na-egosipụta ndepụta nke ngwaọrụ achọrọ mmelite ngwanrọ. Tinye akà rà dị mkpa ma pịa bọtịnụ "Download na Wụnye".
Ihe omume niile ga-eme na ọnọdụ akpaka, chere ruo mgbe ha dechara, mechie usoro ihe omume ahụ ma ị nwere ike ịga n'ihu ilele ọrụ nke onye nbipute ahụ.
Usoro nke 3: Nkwado Mmemme
Na mgbakwunye na akụ ndị isi, ị nwere ike iji mmemme sitere na ndị mmepe nke ọzọ. Ha na-enyocha ihe ndị ejiri ejikọta onwe ha, wee malite ịchọta ngwanrọ kachasị mma. Uru abụghị naanị ịchọpụta akpaka, kamakwa ike yiri nke iji wụnye ma ọ bụ melite ọkwọ ụgbọala ọ bụla maka kọmputa na ebe obibi. Onye ọrụ ahụ na-ekpe ka ịhọrọ software ahụ, nke, n'echiche ya, ịkwesịrị ịwụnye. Na saịtị anyị, e nwere ndepụta nke ngwa kachasị mma nke klaasị a, mara ha na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Karịsịa, anyị chọrọ ịdọrọ uche gaa na DriverPack Solution - otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu maka usoro nchịkọta na mmelite nke ọkwọ ụgbọala. O nwere nchekwa data kachasịsịsị ọnụ, bụ nke a ga-achọta ndị ọkwọ ụgbọala ọbụna maka ebe a na-amaghị nke ọma. Onye na-asọmpi ya bụ DriverMax, ngwa yiri ya. Ị nwere ike ịchọta ntụziaka maka iji ọrụ enyere ha aka.
Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na iji DriverPack Solution
Melite ndị ọkwọ ụgbọala na-eji DriverMax
Usoro 4: ID ID
Ejiri ọnụọgụ ID nke ọ bụla na -wapụta nke ọ bụla, nke a na-ekenye ya naanị site n'aka onye nrụpụta. Ịmata koodu a, ị nwekwara ike ịmalite ma ọ bụ mmalite, mana ma eleghị anya ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọkwọ ụgbọala OS. Maka nke a, a na-eji ọrụ Ịntanetị pụrụ iche mee ihe na-eme nhọrọ nchịkọta nhọrọ site na iji nchọpụta. Na P1102, ọ dị ka nke a:
USBPRINT na Hewlett-PackardHP_La4EA1
Maka ama ndi ozo banyere ihe nyocha site na ID, lee njikọ di n'okpuru.
Usoro 5: Onyeọrụ Windows Manager
Ọ bụghị onye ọ bụla maara na Windows nwere ike ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na onwe ha site na ịme ọchụchọ na Intanet. Ọ na-adaba n'ihi na ọ chọghị iji ụdị ihe omume niile na ọrụ ntanetị, ma ọ bụrụ na ịchọghị ihe ịga nke ọma, ị nwere ike ịgakwuru nhọrọ ndị ọzọ a pụrụ ịtụkwasị obi. Nanị ihe ị ga-eme bụ na ị gaghị enweta uru dị mma maka njikwa nchịkọta dị elu, ma ị nwere ike ịdepụta ibe ọ bụla. A kọwapụtara nkọwa nke nwụnye site na ike arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ n'isiokwu ọzọ anyị.
Gụkwuo: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji ngwaọrụ Windows
Nke a bụ ebe ụzọ na-ewu ewu ma dị mfe iji wụnye onye ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet P1102 na-ebi akwụkwọ. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ usoro dị mfe nke na onye ọrụ nwere ike ijikwa ọbụna obere ihe ọmụma PC.